Kenya: Bokin-tsarintany miteraka fanontaniana maro · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 24 Jolay 2018 15:21 GMT
Miady hevitra mikasika ny PNUE ( Fandaharanasan'ny Firenena Mikambana ho an'ny Tontolo Iainana ) ireo blaogera keniàna. Voalohany, mikasika ny famoahana bokin-tsarintany mampiseho ireo fiovana ara-tontolo iainana ao Kenya, ary faharoa, momba ny fihatsarambelatsihy misy amin'ny famonjena ireo fivorian'ny PNUE anaty fiara mandany solika be. Efa namoaka fanehoankevitra blaogera manoloana ny fampiasan'ny Firenena Mikambana 4 x 4 ny Global Voices tao anatin'ny sokajy ”tontolo iainana” (jereo ny lahatsoratra Kenya : ny 4 x 4 an'ireo mpiasan'ny ONU tamin'ny novambra 2008).
Mitsonga ireo famintinana fototra tao amin'ilay bokin-tsarintany miisa pejy 168 i Phil avy ao amin'ny blaogy Kenya Environment news blog ary mamintina ny zavatra hita. Mampifanandrina izany amin'ny Tanjona Fampandrosoan'ny Taonarivo ( UN's Millenium Development Goals) sy ny Vision 2030, fandaharanasan'ny governemantan'i Kenya izy. Manoratra izy:
Mijery akaiky ilay famoahana ny blaogy Rafiki Kenya ary manontany tena : ”Ny bokin-tsary vaovaon'i Kenya, fandaniana loharanon-karena?”. Ao anatin'ireo fanontaniana hafa momba ilay tatitra, mametraka ny fahazoan'ireo Keniàna salantsalany azy io izy. Eken'ilay blaogera fa manana endrika mahafinaritra ary tena vita tsara ilay tatitra, miaraka amin'ny vaovao sasany mahaliana, saingy…
Tsy takatr'ireo Keniàna salantsalany ihany koa ilay tatitra. Marina fa azonao alaina na/sy vidiana eto ilay tahirin-draikitra. Fa keniàna iza no tena afaka ny haka tahirin-drakitrana 63 MB? Keniàna iza no afaka handoa 80 dolara Amerikana ho an'ny dika an-taratasy? Ary ampahatsiahivana fa sady tsy mbola tafiditra ao anatin'izany ny vidin'ny fandefasana azy avy any Angeletera. Mbola misitery amiko ny hoe fa maninona ny tatitra mikasika an'i Kenya, novokarin'ny fikambanana miorina ao Kenya (PNUE) no mbola tsy maintsy taterina avy any Angletera. Porofona fihatsarambelatsihy hafa avy amin'ny PNUE ve izany? Efa manorisory ny blaogera sasany volana vitsy izay ny fampiasan'ireo mpiasan'ny ONU 4 x 4 ao Nairobi.
Manome tolokevitra ny fanehoankevitra iray navoaka tao amin'ilay tranonkala, izay hamaranantsika ity lahatsoratra ity :